Lightroom CC vaovao mifototra amin'ny rahona | Famoronana an-tserasera
Adobe mandefa Lightroom CC vaovao mifototra amin'ny rahona vaovao
Manuel Ramirez | | maro
Creative Cloud dia iray amin'ireo sehatra fandoavam-bola feno isam-bolana ho an'ny mpamorona. Izy io dia manana programa isan-karazany tena tsara sy fa isan-taona izy ireo dia manavao miaraka amin'ny vaovao tena mahaliana. Ireo endri-javatra vaovao ireo dia matetika manome elatra ho an'ny mpamorona noho ny famoronana vaovao.
Androany rehefa manana Adobe Nanambara ny fanavaozana lehibe ho an'ny fitaovana fanovana sary Lightoom CC. Izy io dia miaraka amina interface vaovao, workflow ary fifantohana napetraka tsara amin'ny fanitsiana miorina amin'ny rahona. Andiam-baovao izay andalovanay hahalalanao ny vaovao tsara.
Tsy maintsy manana serivisy fakana sary vaovao ihany koa isika, fantatra amin'ny anarana hoe Project Nimbus, izay dia mifanandrify indrindra amin'ny fifantohana napetraka amin'ireo drafitra tanterahina ao amin'ny Creative Cloud raha ny momba ny sary.
CC Lightroom vaovao milalao amina interface vaovao sy andiana fitaovana vaovao izay ahafahantsika mifehy ny tenantsika amin'ny fomba mora kokoa amin'ny programa. Ireo fitaovana ireo dia manana Adobe Sensei, teknolojia fianarana milina ho an'ny fikarohana teny lakile, ary fandaminana sary tsara kokoa.
Mikasika ny rahona, Lightroom CC izao dia mamela ny mpampiasa hahafahany manova sy mampifangaro sary amina vahaolana feno amin'ny apps biraonao, fitaovana finday Apple, ary amin'ny Internet. Ity fampifanarahana ity koa dia mahatratra sary RAW.
Ao amin'ny Kinova iOS an'ny Lightroom CC vaovao, Fikarohana Sensei, fanohanana ny fampiharana iOS 11 Files ary interface tsara nohatsaraina amin'ny iPad no atolotra. Izany no antony mahatonga azy ho fampiharana manana fifandraisana matihanina kokoa sy kinova fanavaozana ny teo aloha, izay nantsoina hoe Lightroom Classic CC.
Lightroom CC sy Lightroom Classic CC izao dia amin'ny vidiny 12,09 euro isam-bolana, na dia afaka miditra amin'ny 1TB ianao fa tsy 20GB, amin'ny vidiny 24,19 euro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Adobe mandefa Lightroom CC vaovao mifototra amin'ny rahona vaovao
Rano latsaka miaraka amin'ny Photoshop